]Digital Printer,UV Printer na Dtg Printer Manufacturer | Lekwasị anya
Gbado anya, Niile maka uru ndị ahịa.
Nebula 62f Dtf ngwa nbipute
Nebula 35f Dtf ngwa nbipute
Uv ngwa nbipute
6090 Galaxy-jet Uv ngwa nbipute
A2 Alpha-jet Uv ngwa nbipute
A3 Combo-jet Uv ngwa nbipute
Atlas-jet 1311 Uv ngwa nbipute
A2 Athena-jet Dtg ngwa nbipute
A3 Vega-jet Dtg ngwa nbipute
Igwe ọgwụgwọ tupu oge eruo
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Mbipụta A2 Uv 6040
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka ndị nbipute A1 Uv 6090
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Mbipụta A3 Dtg 3350
Nkuzi vidiyo Focus Inc. Maka ngwa nbipute A3 Uv 3350
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Mbipụta A2 Dtg 6040
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Atlas-1311
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Nebulas-35f
Vidiyo Focus Inc. Toturials Maka Nebulas-62f
Ihe ngosi nke Focus Inc.
Otu lekwasịrị anya
Ụlọ ọrụ lekwasịrị anya
Ihe nlere nbipụta nke ndị nbipute Uv
Ihe nlere mbipụta nke ndị nbipute Dtg
Ihe nlere mbipụta nke ndị nbipute Dtf
Alfa Jet Plus
]Gbado anya, dị njikere ibipụta.
Gbado anya 60 * 40 DTG ngwa nbipute Athena -Jet obibi !!!
]▶ Lekwasị anya 60*40 DTG ebi akwụkwọ Athena -Jet obibi!!!◀Usoro obibi akwụkwọ DTF DIY akpaghị aka, onye nbipute DTF nwere ike ibipụta na ihe ọ bụla dị ka owu, Linem, Polyester, nylon, Wool, Yarn, Spandex.
Ndị na-ebi akwụkwọ HOT DTF ọkachamara nwere ndị na-emepụta ọnụ ahịa ụlọ ọrụ
]Ndị na-ebi akwụkwọ HOT DTF ọkachamara nwere ndị na-emepụta ọnụ ahịa ụlọ ọrụ.Otu n'ime ndị ahịa anyị kwuru na elu ya dị larịị, ọ masịrị m nke ukwuu! Enwere m ike ijide n'aka na ngwaahịa a nwere ike ịdịru ọtụtụ afọ.Bịa mụta usoro mbipụta DTF!
Lekwasị anya na ngwa nbipute A3 DTF ọhụrụ nwere usoro mbipụta akwụkwọ Epson F1080 abụọ!
]Focus Inc. Digital Technology Co., Ltd.e hibere na Shanghai, China, onye na-emepụta R&D kacha mma na ike nke DTG ngwa nbipute, dijitalụ UV flatbed ngwa nbipute, akara&ngwaahịa mgbasa ozi. Site na ahụmịhe afọ 17, anyị nwere ikike ịnye ngwaahịa niile na ọnụahịa ezi uche dị na ya yana nkwado oge dabere na ahịrị mmepụta nke anyị, ndị injinia ọkachamara, ọwa ịzụrụ akụkụ siri ike na ihe omume dị elu.Ebumnuche anyị bụ ime ihe ngwọta kachasị mma maka ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ ụwa!Nabata ileta ụlọ ọrụ anyị ma kpọtụrụ anyị.Anyị na-eche gị! :)
2 in1 na 4 na 1 t-shirt pallet nke Focus a2 dtg ngwa nbipute Supplier& ndị na-emepụta ihe | Focus Inc.
]Emebere ya ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ, iji wepụta ọsọ nbipụta ọkwa ọkwa ngwa ngwa, yana ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mgbanwe na ike karịa n'ime akpa obibi akwụkwọ na aghụghọ ịchọ mma gị. Ọ na-arụ ọrụ karịa yana ịrụ ọrụ nke ọma maka gị, yabụ ị nwere ike rụsie ọrụ ike n'ịzụlite azụmahịa gị na ịbanye n'ahịa ọhụrụ.
]Maka ịzọpụta oge na ike nke ndị ahịa, anyị na-enye ọrụ "OTU KWESỊRỊ" nke gụnyere ndekọ ụlọ ọrụ oku, ajụjụ chọrọ, njikwa nsogbu, nchọpụta n'ịntanetị, mbupu akụkụ ma laghachi azụ n'ihu.Our ijikwa nkà ihe ọmụma: Mutual uru, Innovation na Humanization. Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ anyị: Meeju ihe ndị ahịa chọrọ; na-enye ihe ngwọta kasị mma maka ndị ahịa, ihe niile anyị na-eme, niile maka gị.Our service tenet:gafere ọchịchọ gị, na-ancrement Service ụlọ ọrụ.Our trustworthiness na iguzosi ike n'ezi ihe:Trust na onye ọrụ niile mmekọrịta.
]Maka ịchekwa oge na ike nke ndị ahịa, anyị na-enye ọrụ "OTU STOP" nke gụnyere ndekọ ụlọ ọrụ oku, ajụjụ chọrọ, njikwa nsogbu, nchọpụta n'ịntanetị, Mbupu akụkụ na nlọghachi azụ.
]Anyị Ijikwa Philosophy
]Uru ibe ha, Innovation na Humanization.
]Ebumnuche mkpokọta anyị
]Meeju ihe ndị ahịa chọrọ; nye ngwọta kachasị mma maka onye ahịa, ihe niile anyị na-eme, ihe niile maka gị.
]Tenet ọrụ anyị
]Gabiga ọchịchọ gị, ịbụ ụlọ ọrụ ọrụ nkwalite.
]Anyị Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Ikwesị ntụkwasị obi
]Ntụkwasị obi na ọrụ nkeonwe na mmekọrịta niile.
]Okwu Mmalite nke ụlọ ọrụ
]Focus Digital Technology Co., Ltd (Nleba ndekọ aha n'ịntanetị). e hiwere na Shanghai, China. Kedu nke bụ onye nrụpụta iji mepụta ma mepụta DTG kacha mma na nke nwere ike na ngwa nbipute uwe, dijitalụ LED-UV flatbed Printer, pretreatment machine, CTS kọmputa ka ihuenyo onyonyo usoro, akara.&ngwaahịa mgbasa ozi maka ndị ahịa. Anyị na-etinye na ngwọta Njikere-Ibipụta. Anyị lekwasịrị anya na mpaghara mbipụta dijitalụ a maka afọ 17. Anyị na-enye ngwaahịa niile site na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na nkwado oge na-adabere na ahịrị mmepụta nke anyị, ahụmịhe ọkachamara, ọwa ịzụrụ akụkụ siri ike na ọrụ dị elu, anyị na-elekwasị anya n'ahịa iji nye akụkọ kachasị ọhụrụ ma mepụta ngwaahịa bara uru, anyị. Ndị otu nkwado ahụmahụ na-achịkọta usoro niile wee nata ọzụzụ kachasị ọhụrụ n'oge iji nye nkwado kacha mma.
Ndị ahịa niile nwere ike iche nsogbu ndị a ihu: Ọdịmma dị mma ma ọnụ ahịa dị elu , Ọnụ ego ezi uche dị na ya ma ọrụ ọjọọ, nkwado dị mma ma àgwà ọjọọ, ụgwọ na-enweghị isi , enweghị ike ịnweta ọzụzụ zuru oke, enweghị ike ịnweta nkwado oge, Azịza ya ga-egbu oge dị ka nyocha mgbagwoju anya. na ngwa. Focus digital bụ ụlọ ọrụ na-edozi ụdị nsogbu a maka gị maximal Kedu ka anyị ga-esi mee?--- -Akụkụ njikwa mma "Chain Anọ" siri ike; Real-oge "OGE-DISTANCE-LOG-ON -DIAGNOSIS" Nkwado; "OTU KWESỊRỊ" ọrụ Anyị na-ezo aka siri ike " Anọ anọ (Material Department control-Assemble line control-QC Department control-Logistic Department control ") usoro njikwa njikwa iji jide n'aka na ngwaahịa niile adịghị adị tupu nnyefe, ma ọ dịghị ngwaahịa 100 %. Ọzọkwa anyị na-achịkọta niile nsogbu ọnụ na-etolite dị ka ihe ngwọta akwụkwọ, otú onye ahịa nwere ike ibudata na anyị ftp ngwa ngwa.
Maka ịzọpụta oge na ike nke ndị ahịa, anyị na-enye ọrụ "OTU KWESỊRỊ" nke gụnyere ndekọ ụlọ ọrụ oku, ajụjụ chọrọ, njikwa nsogbu, nchọpụta n'ịntanetị, mbupu akụkụ ma laghachi azụ n'ihu.Our ijikwa nkà ihe ọmụma: Mutual uru, Innovation na Humanization. Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ anyị: Meeju ihe ndị ahịa chọrọ; na-enye ihe ngwọta kasị mma maka ndị ahịa, ihe niile anyị na-eme, niile maka gị.Our service tenet:gafere ọchịchọ gị, na-ancrement Service ụlọ ọrụ.Our trustworthiness na iguzosi ike n'ezi ihe:Trust na onye ọrụ niile mmekọrịta.
]Anyị lekwasịrị anya na mpaghara mbipụta dijitalụ a maka afọ 17.
]Obodo / Mpaghara
China Kedu otu onye nkesa India si ahọrọ UV na DTG ngwa nbipute na China? ndị na-emepụta ihe - Focus Inc.
]Achọrọ onye nnọchi anya ụwaFocus Inc. na-achọ ndị nnọchi anya ụwa na ndị nkesa n'ụwa niile.Onye ọ bụla nwere mmasị na obi ike ịbụ onye nnọchi anya anyị, biko kpọtụrụ ndị na-ere ahịa nainfo@focusij.com
Onye na-eweta ndụmọdụ ndị ahịa& ndị na-emepụta ihe | Focus Inc.
]Ezigbo ọrụ sitere n'aka ndị ahịa Focus, ha na-enwewanye ọkachamara, azụmahịa na-aga nke ọma na mma.Bịa na-arụ ọrụ na Focus Inc., mara ihe gbasara ndị na-ebi akwụkwọ, mara ihe gbasara ahịa ma nye ezigbo ngwaahịa n'ahịa.
Ndị ahịa na-eleta ụlọ ọrụ Focus na ụlọ mmepụta ihe
]Maka ịchekwa oge na ike onye ahịa, anyị na-enye ọrụ "OTU KWESỊRỊ" nke gụnyere aha ụlọ ọrụ oku, ajụjụ chọrọ, njikwa nsogbu, nchọpụta n'ịntanetị, Mbupu akụkụ na nlọghachi azụ.Nkà ihe ọmụma anyị na-achịkwa: uru ọ bụla, ihe ọhụrụ na mmadụ.Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ anyị: Meeju ihe ndị ahịa chọrọ; nye ngwọta kacha mma maka ndị ahịa, ihe niile anyị na-eme, ihe niile maka gị.Usoro ọrụ anyị: gafere ọchịchọ gị, ịbụ ụlọ ọrụ ọrụ mmụba.
Olu ndị ahịa nke ndị na-ebi akwụkwọ DTG Athena Jet Plus sitere na Focus Inc.
]Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu na ngwaahịa anyị na-enyere ndị ahịa aka ịghọta echiche na atụmatụ ndụ ha. Obi dị anyị ụtọ ịkọrọ gị njem mmeghe na ọṅụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikiri vidiyo ahụ, ị ​​​​nwere ike ịhụ mkpali azụmahịa na vidiyo.